के तपाईँ एक व्रिmश्चियन जस्तै देखिनु हुन्छ? – Nepali Website
के तपाईँ एक व्रिmश्चियन जस्तै देखिनु हुन्छ?
March 4, 2013 by Binod
“तर तपाईँको विचार के हो, सो तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ । किनकि यस दलको विषयमा हामीलाई यति मात्र थाहा छ, कि जताततै मानिसहरू यसको विरुद्धमा मात्रै बोल्दछन् ।” प्रेरित २८ः२२ ।
अत्याचार र निन्दाहरूसँग अर्ली मार्निङ्ग चर्च अपरिचित थिएन । आफ्नो विरुद्ध धेरै कुरा सुन्नु प्रभु येशूका सबै अनुयायीहरूको साझा भाग्य हो । “सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन ।” यदि तपाईँ वास्तवमा परमेश्वरको नानी हुनुहुन्छ भने, यस पीढीमा पनि यस तरिकामा कुनै कमीको अपेक्षा गर्नु पर्दैन । येशूले हामीलाई इमानदारीसाथ पूर्व चेताउनी दिनु भयो ः “भाइ हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दा अचम्म नमान ।” १ यूहन्ना ३ः१३ । “यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने, तिमीहरू जान, कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो ।” यूहन्ना १५ः१८ ।
हाम्रा स्वामीभन्दा माथि नभएका कारण, हाम्रो युगमा परमेश्वरको वास्तविक चर्चका विरुद्ध त्यसलाई कुनै विधर्म संप्रदायको संज्ञा दिएमा, वा, हाम्रो समयको शब्दाडम्बरको उपयोगमा, पन्थको संज्ञा दिएमा, कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
आत्मप्रशंसित “पन्थ विशेषज्ञहरू” हाम्रो संसारमा छन्, नयाँ करारका चर्च बारे जसलाई कुनै बोध नभए तापनि जसले परमेश्वरका वचनहरूका सट्टा मुख्यधाराका धर्मको मिसावट (त्यसलाई व्रिmश्चियन धर्मनिष्ठाको मानक ठानेर) मार्फत मूल्याङ्कन गर्दछन्, अनि विश्वव्यापी प्रवाहबाट अलग पथमा हिँडनेका विरुद्ध जसले तयारी नाम “पन्थ ! पन्थ !” भनेर चिच्च्याउँछन् । त्यस कारण, उनीहरूले केवल धर्मशास्त्रहरूप्रति आफ्नो अपरिचय प्रमाणित गर्छन् र आफ्नो आध्यात्मिक अन्धोपनाको पुष्टि गर्छन् ।
हरे, यस सबैको विडम्बना—जबकि यी “पन्थ स्वामीहरू” ले स्वयंलाई धर्म र धर्मनिष्ठाका संरक्षक ठान्छन्, उनीहरूले प्रयोग गरिने तर्कहरूद्वारा उनीहरूले अर्ली मार्निङ्ग चर्चलाई पन्थ हुने आरोप लगाउँछन् । के ! नयाँ करारको चर्चले एक पन्थ मात्र हुने संज्ञा पाएको? कुरा के छ भने, यी आत्मस्वीकृत विशेषज्ञहरूद्वारा वर्णित सामान्य रूपमा “कुनै पन्थका चिन्हहरू” भन्ने मानदण्डमा नयाँ करारको चर्च आश्चर्यजनक रूपमा पन्थको वर्गमा पर्छ । “कुनै पन्थका चिन्हहरू” मध्ये केहीको हामी अब चर्चा गरौँ ।
पन्थहरू अलग भएका साना समूहहरू हुन् ।
आफ्नो समयको स्थापित धर्मबाट अलग भएको एक विद्रोही येशूलाई प्रकल्पित गरिने गरिन्थ्यो । पावल फरीसिहरूबाट अलग भए । बाइबलविपरीतको कैथोलिक सम्प्रदायबाट लूथर अलग भए । के हामीले यो विश्वास गर्नु पर्छ र कि यी सबै पन्थवादी कार्यहरू थिए? हामी सबैलाई यसभन्दा अधिक ज्ञान छ ।
कुनै सम्प्रदायका व्यवहारहरू बाइबल विरोधी छन् भन्ने कुरा जाने पछि यदि कसैकसैले त्यस्तो सम्प्रदाय त्याग्छन् र बाइबल अनुसारका व्यवहार गर्ने विश्वासीहरूको निकायमा सामेल हुन्छन् भने के त्यस्तो “अलग्याइ” ले उनीहरूलाई कुनै पन्थको सदस्य बनाउँछ? त्यस्तो भए भने, प्रेरितहरूले पारम्पारिक यहूदी धर्मलाई त्याग्नु हुँदैन थियो ।
यसका अतिरिक्त, प्रकाश र अन्धकार, धर्म र अधर्मको मिश्रण भएको ठाउँ (यो विवरण सम्प्रदायवादीको लागि उपयुक्त छ) मा स्वयंलाई पाउने व्यक्तिहरूलाई बाइबलले २ कोरिन्थी ६ः१७ मा किन “यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ, र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग होओ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ । अशुद्ध कुरा केही नछोओ, र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्ने छु” भनेर निर्देश दिएको छ । चर्चको इतिहासको व्रmममा “साना समूहहरू” ले बाइबलको यसै “अलग होओ” भन्ने आज्ञाको पालन गरेका छन् । प्रकाश १८ः४ ले पनि के घोषणा गरेको छ भने, परमेश्वरका सच्चा मानिसहरूले त्यस्ता ठाउँहरूबाट (अलग) हुनु पर्छ नत्र, उनीहरू त्यहीँ बस्दै गरे भने, उनीहरूलाई उहाँको निर्णयको आध्यात्मिक खतरा हुने छ ।
अलग भएका ससाना समूहहरू पन्थहरू छन् भन्नु एउटा व्यापक बयान हो जसको परिधिमा कैयौँ समूह वा व्यक्तिहरू पर्न सक्छने छन् ।
अनि हामीले के स्मरण गर्नु पर्छ भने, स्वयं प्रभु येशूले भन्नु भयो, विनाशमा पु¥याउने फराकिलो बाटोमा धेरै जाने छन्, जबकि जीवनमा पु¥याउने साँघुरो बाटो थोरैले पाउने छन् । लूका १२ः३२ मा, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सानो बगाल भनेर उद्धरण गर्नु हुन्छ ।
पन्थहरू अनुमोदित व्रिmश्चियन धर्म (मुख्यधाराको व्रिmश्चियन धर्म) बाट अलग दिशामा हिँड्छन् ।
यहाँ एउटा समस्या छ । म बुझ्छु कि “मुख्यधाराको व्रिmश्चियन धर्म” लोकप्रिय छ, तर के त्यो धर्मनिष्ठ छ? धर्मशास्त्रहरूको नयाँ करार चर्चसँग यसको तुलना गर्नुहोस् । त्यससँग यसको कुनै समानता छैन । उनीहरूले बाइबलद्वारा तिरस्कृत समुदायका विभाजनहरूलाई प्रवर्धन गर्छन् र परमेश्वरको बगाललाई प्रभु येशूका नाममा एक बनाउने पावलले गरेका आग्रह विरुद्ध त्यसरी परमेश्वरको बगाललाई बिखण्डन गर्छन् । अनि प्रभु येशूको नाममा केवल शारीरिक रूपमा समारोहहरूमा एक हुने आग्रह पावलले गरेका छैनन्, तर सिद्धान्त र विश्वासमा पनि एक हुने र सबैले एकै मत र एकै विचार बोल्ने आग्रह उनले गरेका छन् (१ कोरिन्थी १ः१०) ।
बाइबलका चर्चको कुनै परिकल्पना आज मानिसहरूसँग छैन । त्यो परिकल्पना उनीहरूको बोधबाट बाहिर छ । त्यस कारण, उनीहरूले धर्मनिष्ठा के हो भन्ने बारे कसरी निर्णय गर्न सक्छन्? सम्प्रदायवादिताले दृष्टिहीन भएका कारण बहुमतमा रहेका व्यक्तिहरू मात्र सही वा मार्गका मानक सिद्ध हुँदैनन् । बाइबलको इमानदार र ध्यानपूर्वक अध्ययनले साबित गर्ने छ कि वास्तवमा “मुख्यधाराको व्रिmश्चियनिटी” नै सत्यनिष्ठ व्रिmश्चियनिटीको दिशाबाट अलग भएको छ !
यस कुराको पनि विचार गर्नुहोस् कि प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरूलाई पनि आ(आफ्नो समयको स्वीकृत धार्मिक नीतिबाट अलग भएका ठानिने गरिन्थ्यो ।
पन्थहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्छन् र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्छन् ।
एक व्रिmश्चियनको अनुभूति अन्तर्निहित र हार्दिक हुन्छ भन्ने कुरामा हामीमध्ये कसैले पनि कुनै रूपमा पनि अस्वीकार गर्दैन । यो वास्तवमा एक अन्तर्निहित अनुभूति हो, जसले आत्माका लागि नयाँ जीवन प्राप्त गर्छ र पापमाथि शक्ति प्रदान गर्छ, तर यी यथार्थहरूले कुनै तरिकामा पनि हाम्रो तर्कको खण्डन गर्ने छैन ।
हाम्रा युगका राक एन्ड रैप सङ्गीतकारहरू आफ्ना व्यवसायसँग सुसङ्गतमा छन् । उनीहरूले केही हुने दाबी मात्र गर्दैनन्, तर उनीहरू जे छन्, त्यस्तै देखिन्छन् । बाहुलाबिनाको कमीज र बैगी शार्टस पहिरेको युवा बास्केटबालप्रेमीको उदाहरण हेरौँ । उसले ह्रदयमा मात्र यस खेललाई माया गर्दैन, तर आफ्नो प्रेमसँग ऊ सुसङ्गतमा पनि छ र ऊ बास्केटबाल खेलाडीको एक भाग पनि लाग्छ । त्यसरी नै देशीय सङ्गीतका गायकहरू छन्, जो जस्ता छन् बिल्कुल त्यस्तै देखिन्छन् ।
उपरोक्त सबैमा यो बलियो गुण छ, उनीहरू जे छन्, त्यही हुने उनीहरूको दाबी पनि छ । अब हामी आत्मस्वीकृत व्रिmश्चियन संसार हेरौँ, अनि बाबै, यो कस्तो अन्तरविरोध हाम्रा आँखाले देख्छन् । तथाकथित “येशूका मानिसहरू” “रैप मानिसहरू” सरह देखिन्छन् । “प्रभु येशूका प्रेमीहरू” “राक प्रेमीहरू” जस्ता देखिन्छन् । परमेश्वरको कुनै पनि नानीलाई हामी अपमान गर्न खोजी रहेका छैनौँ, तर यसले केवल तपाईँको राम्रो निर्णयशक्तिलाई ब्यूँझाओस् । यो कुरा म यसरी व्यक्त गर्छु । यदि संयुक्त राज्यको सेनामा म एक सैनिक भए र लगातार आफ्नो देशको लागि मेरो प्रेमको पुष्टि गर्थिएँ भने, कुनै अन्य देशको बर्दी–पोशाक पहिरेका कारण के म संदिग्ध हुने थिएँन र? मेरो विश्वास कसले गर्ने थियो? मेरो पोशाकको अन्तर्विरोधले मेरो दाबीलाई अविश्वासी बनाउने थियो ।
हरेक व्रिmश्चियनले यो स्पष्ट रूपमा देखोस् । आत्मस्वीकृत व्रिmश्चियन संसारले, सामान्य रूपमा, आज संसारलाई जित्न सक्दैन, किनभने आत्मस्वीकृत व्रिmश्चियन संसारका व्यक्तिहरू स्वयं संसारै छन् । संसार सामेल भएको सबै
थोकमा उनीहरू पनि सामेल छन्; अनि यति मात्र होइन, उनीहरू संसार जस्तै देखिन्छन् पनि । हाम्रो पोशाकको तरिकाले हामीलाई व्रिmश्चियन बनाउँछ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ, तर व्रिmश्चियन हुने गुणका कारण हामी व्रिmश्चियन जस्ता देखिन्छौँ ।
संसारसँग अनुरूप भएर हामीले संसारलाई जित्न सक्दैनौँ । उनी सबै मानिसहरूका लागि सबै थोक हुनु भए, पावलले त्यस्तो भनेका कुरासँग हामी अवगत छौँ, तर त्यही पावलले हामीलाई संसारसँग अनुरूप नहोओ भनेका छन् । मानिसहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति विधिवत् र बाइबलले बयान गरेका रूपमा पावलले चरमसीमा सम्मै आफ्नो सर्वोत्तम प्रयास गर्ने गर्थे । यसभन्दा अधिक हामीले ग¥यौँ भने, हामी हाम्रै मन अनुसार सञ्चालित हुने छौँ अनि त्यसबाट त्रासदी उत्पन्न हुन्छ, मुक्ति प्राप्त हुँदैन । आत्मस्वीकृत व्रिmश्चियन संसारका मानिसहरू धर्मनिरपेक्ष संसारसँग त्यति अनुरूप भएका छन् कि मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने कुनै चीज उनीहरूसँग शेष रहेको छैन । यो एक तथ्य छ । यदि हाम्रा येशू दलहरू रेपहरू, राकहरू, स्कौर डान्सहरू, टामी हिलफिगर पोशाक आदिमा हुने छन्, र पापमाथि शक्ति प्रदान गर्ने कुनै निश्चित आत्मा परिवर्तन उनीहरूमा रहने छैन, तब हामीहरूसँग प्रस्तुत गर्नलाई वास्तवमा के हुने छ? यी स्पष्ट तथ्यहरूको सच्चा व्रिmश्चियनहरूले समर्थन गरून् ।
के येशूले वास्तवमा हाम्रो बाहिरी चालढालमा त्यति ध्यान दिनु हुन्छ? हो, कस्तो पोशाक लगाउने वा नलगाउने कुरा जहाँसम्म बाइबलले वर्णन गरेको छ, त्यतिसम्म येशूले यस कुरामा ध्यान दिनु हुन्छ । (१ पत्रुस ३ः३–५, १ तिमोथी २ः९–१०) । यदि तपाईँका चेलाहरू हुने थिए, संसारमा तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँले जसलाई आज्ञा दिनु हुने थियो भने, उनीहरूले तपाईँको प्रतिनिधित्व कसरी गरून् भन्ने विषयमा तपाईँको कस्तो इच्छा हुने थियो? तपाईँ वास्तवमा जे हुनुहुन्छ, के त्यही अनुसार उनीहरूले तपाईँको प्रतिनिधित्व गरून् तपाईँले चाहनु हुन्न थियो? यदि तपाईँ एक गाई चराउने व्यक्ति भएको भए, के तपाईँ आफ्ना चेलाहरूलाई रैपर जस्तो देखिन चाहनु हुन्थ्यो? संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले गुलाफी कपाल भएको र शार्ट प्यान्ट लगाएका मानिसहरूलाई महासागरपारी शान्ति वार्ताहरूका लागि के पठाउनु हुने छ?
स्वर्गका पवित्र र पूर्ण रूपमा शुद्ध परमेश्वरले यसभन्दा पनि कति अधिक तरिकामा आफ्ना मानिसहरूलाई पठाउनु हुन्न थियो । परमेश्वर कुनै सम्झौतावादी हुनुहुन्न । उहाँ संसारका सामु झुक्ने र निहुरिनेवाला हुनुहुन्न । हाम्रो आफ्नो उत्तमका लागि उहाँले आफ्नै अधिकारमा हामीहरूबाट उहाँका नियमहरूप्रति आज्ञाकारिता माग्नु हुन्छ । हाम्रो आफ्नै भरमा संसार जित्ने विधि हामीलाई आउँदैन, तर प्रभु येशूलाई आउँछ । सांसारिक मान्छेहरू संसार र संसारले प्रस्तुत गर्ने हरेक थोकबाट थकित हुने छन् । त्यस्ता थकित आत्माहरूलाई आत्मस्वीकृत व्रिmश्चियनहरूले त्यही प्रस्तुत गर्ने जसबाट उनीहरू थकित भएका छन्, परमेश्वरले त्यस्तो नगरून् । परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् ।
निसन्देह संसारमा सधैँ त्यस्ता धार्मिक मानिसहरू विद्यमान हुने छन् जसले यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका सत्यहरूसँग घृणा गर्ने छन् । त्यस्ता मानिसहरूले यहाँ हामीले व्यक्त गरेका सबै कुरालाई “बकवास” भनेर त्याग्ने छन्, तर परमेश्वरका सच्चा नानीहरूलाई प्रभु येशूका इच्छाहरूसँग सरोकार हुने छ । बाहिरी चालढाल निकै महत्वपूर्ण छ । एक व्रिmश्चियनको तरिकाको पोशाक लगाएर कुनै व्यक्ति व्रिmश्चियन बन्दैन, तर त्यस्तो पोशाक नलगाउनका निम्ति यो कुनै बहाना हुनु सक्दैन ।
Categories लेखहरू Post navigation
आफ्नो घरको शासन
© 2022 Nepali Website • Built with GeneratePress